बासु माविकी छात्रालाई ‘कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार’ | नुवागी
बासु माविकी छात्रालाई ‘कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार’
भक्तपुर ३१ भदौ । भक्तपुरको बासु माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई यो वर्षको कार्तिकेय बाल प्रतिभा पुरस्कारले पुरस्कृत गरिने भएको छ ।
सो विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी याङजी थोकरलाई कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार, २०७५ प्रदान गरिने भएको हो ।
आफ्नो मातृभाषा (तामाङ भाषा) मा निबन्ध संग्रह रचना गर्ने १४ वर्षीया थोकरलाई प्रोत्साहनस्वरुप यो पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्तिकेय ट्रस्टले जनाएको छ । उनलाई पुरस्कार स्वरुप नगद रु. ५ हजार प्रदान गरिने भएको छ ।
उनको ‘चिडियाखाना कोर्निमा’ (चिडियाखाना घुम्न जाँदा) नामक बालनिबन्ध संग्रह तामाङ भाषामा प्रकाशित । बालसाहित्यका किताबहरु खुबै पढ्ने यिनलाई साहित्यकार रामेश लिखित ‘मैले बिर्सन नसकेको साथी’ निक्कै मनपर्छ । याङ्जी साहित्यकार ईश्वर थोकरकी बहिनी पनि हुन् ।
कार्तिकेय लिखित रंगीन बालचित्रकथा पुस्तकहरु ‘फुच्ची नानी सूर्य भेट्न गइन्’, ‘नयन हरायो’, ‘आमा, पपी छुट्यो’, ‘वाहा! दुनोट पसलेकी छोरी’, ‘साँच्चैको हिरो हो कृष्णबहादुर’, ‘डस्टर उड्यो’, ‘ड्राइभर अंकल किन रोए ?’ आदि कथा उनले पढ्न भ्याइसकेकी छिन् ।
कार्तिकेय ट्रस्टले विगत १८ वर्षदेखि बालप्रतिभाहरुलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यस ट्रस्टका संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ शिक्षसेवी मोहन कार्की हुन् । यो पुरस्कार कार्तिकेय लिखित पुस्तकहरुबाट प्राप्त रोयल्टी रकमबाट वितरण हुँदै आएको छ । कार्तिकेयका लेखन, सम्पादन र अनुवाद गरी १ सय बढी कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
विद्यालयस्तरीय प्रतियोगिता जारी
देवी माविले स्वर्ण स्मारिका निकाल्ने, सहयोग गर्न प्रअको आग्रह